Ihowuliseyili Heavy Duty Retractable Dog leash mveliso kunye nabathengisi | IKudi
1.Imeko enzima yeTyala leNja yeLeash yenziwe ngezinto zepremiyamu ye-ABS + TPR, ukuthintela ukuqhekeka kwetyala ngokuwa ngengozi.
2.Lokhu kuthathwa kwe-leash ngetapeyiphu ebonakalayo enokufikelela kwi-5M, ke iya kuba lukhuseleko ngakumbi xa usebenza nenja yakho ebusuku.
I-3.Umthwalo oMninzi oSebenzisekayo wenja e-Reash enentshukumo eyomeleleyo yasentwasahlobo yokurhoxisa kakuhle, ukuya kuthi ga kuma-50,000 amaxesha. Ilungele inja enkulu enamandla, izinja eziphakathi kunye nezincinci.
4.Umthwalo onzima oSebenzisekayo weNja yeLeash nayo ine-360° I-leash-free pet leash inika inkululeko ngakumbi kwizilwanyana zasekhaya zokuhamba kwaye ngekhe uzisongele ukhokele.
Luhlaza, orenji okanye isiko
Uncedo loMsebenzi oMninzi oSebenzayo oRholwayo weNja
I-brake ethembekileyo, iqhaga lokuvula kunye nokuvula iqhosha liqinisekisa ukuba iribhoni inokukhula kwaye irhoxise kakuhle. Cinezela iqhosha lokuqhekeza ukuze uliqhekeze, kwaye uslayidele iqhosha elitshixwayo phambili ukuze utshixe leash. Slayida iqhosha lokutshixa ngasemva ukuze ubuyisele imeko yasimahla. Inkqubo yokutshixa lo msebenzi unzima wokurhoxisa inja ilula kakhulu ukubandakanya kwaye ifuna umgudu omncinci wokwenza njalo, kulula kunye nokhuseleko.
Umfanekiso we-Heavy Duty Retractable Dog Leash
Ixabiso le-1: Eyona mveliso idumileyo ngexabiso elihle phakathi kwabathengisi
Ukuhanjiswa okukhawulezileyo- Ixesha lokuThumela <90% yababoneleli
Umgangatho oQinisekisiweyo-100% ukhangelwe yi-QC yethu kumaxesha ama-3 ngaphambi kokuziswa
4. Inqanaba elinye kuMboneleli weSibonelelo sePet-Ukonga ixesha lakho le-90%
5. Emva koKhuselo lweNkonzo-Phantse i-0 yoMgangatho wokukhalaza kule minyaka mi-5 idlulileyo
6.Mpendulo engxamisekileyo -Iimeyile ziya kuphendulwa ngaphandle kokulibaziseka sakuba nje sifumene
Egqithileyo Inja kunye nekati yokuhlamba iMassage Brush
Okulandelayo: Ukubonakalisa akukho kuDonsa iiNja
Ityala le-Heavy Duty Retractable Dog Leash lenziwe ngezinto ze-premium ABS + TPR
thintela ukuqhekeka kwetyala ngokuwa ngengozi. 2.Le leash yokurhoxisa ithathe kunye ne-nylon tape enokubonakalisa
Isiko eliRhwebayo ngobuNja
Inja yoKhuseleko lweBhanti kunye nesihlalo seBelt
Ukuzibophelela kwesiqhelo kweZinja
Inayiloni Mesh Inja yokubopha